होमपेज / कला / नेपाली फिल्म / 'ध्यानी' झरना
'ध्यानी' झरना	05 Jul 2013 | 09:47am शुक्रबार २१ असार, २०७०
काठमाडौं - ग्ल्यामर दुनियाँमा व्यस्त रहने पूर्व मिस नेपाल झरना ब्रजाचार्य आजभोलि ध्यानी बनेकी छिन्। 'जेस् मेडिटेसन सेन्टर' नामक ध्यान केन्द्र खोलेर झरनाले ध्यानी हुने अभिलाषालाई मूर्त रुप दिएकी हुन्। स्वयम्भुस्थित बज्र होटलमा स्थापना भएको ध्यानकेन्द्रमा उनी स्वयं त ध्यान गर्छिन् नै अरुलाई पनि सिकाउँछिन्। दुई महिनादेखि सञ्चालनमा आएको ध्यानकेन्द्रले एक सय २५ जनालाई प्रशिक्षण दिइसकेको छ। ध्यानलाई विधिवत रुपमा विकसित गर्ने उद्देश्यले स्थापित 'जेस् मेडिटेसन सेन्टर'मार्फत् उनले ध्यानसम्बन्धी कार्यशाला समेत दिइरहेकी छिन्। 'ध्यानलाई बुझ्ने कुरामा मानिसबीच थुप्रै भ्रमहरु छन्। कार्याशालामार्फत् त्यस्ता भ्रमहरु हटाउन र ध्यानलाई गम्भीरतापूर्वक लिन प्रेरित गरिरहेका छांै,' झरना भन्छिन्। विचार र शरीर दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्ने हुनाले ध्यानमा उनको खास रुचि रहेको हो। 'जेस् मेडिटेसन सेन्टर'मा उनी स्वयं पनि ध्यान सिकाउँछिन्। 'मैले आनापाना सूत्र सिकाउने गरेकी छु,' उनी भन्छिन्, 'श्वासप्रश्वाससम्बन्धी ध्यान भएकाले धेरै उपयोगी पनि हुन्छ।' उनीसँग यसरी प्रशिक्षण लिन आउनेहरुमा पाका उमेरका मानिसको बाहुल्य छ। ध्यान सिक्नलाई उमेरको कुनै हदबन्दी नभएको बताउने झरना ध्यानको कुरा गर्दा कुनै धर्म गुरुभन्दा कम देखिन्नन्। 'बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैले ध्यान गर्न सक्छन्। यो बहुउपयोगी हुन्छ। तनावबाट मुक्त हुनदेखि उर्जा प्राप्त गर्नसम्ममा ध्यानले सघाउँछ। दिनमा एक घन्टा ध्यान गरे धेरै फाइदा हुन्छ,' उनले भनिन्। ध्यान केन्द्र स्थापनामा सुशील श्रेष्ठ र बज्र होटलले उनलाई साथ दिएका छन्। यतिबेला ध्यानकेन्द्र खोलेर पर्दाअगाडि आए पनि झरना पुराना ध्यानी हुन्। मिस नेपालमा भाग लिनुअघि देखिनै झरना आफूले ध्यान गर्ने गरेको बताउँछिन्। परिवारमा अरु सदस्यको देखासिकीमा ध्यानको दुनियाँमा प्रवेश गरे पनि समयक्रममा यसलाई जीवनको अभिन्न अंंग बनाएको झरनाको भनाइ छ। १६ वर्षअघि उनले पहिलोपटक १० दिने विपश्यना कोर्स गरेकी हुन्। 'जेस् मेडिटेसन सेन्टर'मा प्रति घन्टा ध्यान गरेको शुल्क पाँच सय रहेको छ। 'सहभागीबाट आएको शुल्कको ३० प्रतिशत रकम अन्तरदृष्टि नामक संस्थालाई जान्छ।' अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार उनी ध्यान सिकाउन योग्य व्यक्ति होइनन्, किनकि ध्यान प्रशिक्षक बन्न अन्तर्राष्ट्रिय गुरुहरुसँग १० दिने प्रशिक्षण लिनुपर्छ, जुन उनले लिन पाएकी छैनन्। व्यावहारिक रुपमा लामो समयदेखि ध्यानमा आवद्ध भएको हुनाले प्रशिक्षणको काम पनि गरिरहेकी हुन्। 'दुई वर्षअघि बेलायतमा पाँच महिनाको ध्यान प्रशिक्षण सिध्याएर फर्केकी हुँ। जानेको कुरा सिकाउन सक्छु भनेर ध्यानकेन्द्र स्थापना गरेको हुँ,' झरनाले भनिन्।एक घन्टाको प्रशिक्षणमा उनले आँखा चिम्लिने, शारीरिक हाउभाउ मिलाउनेदेखि दिमागलाई नियन्त्रणमा राखेर मनमा आउने कुराहरुलाई साक्षात्कार गराउने र बिस्तारै फ्रेस बनाउने गर्छिन्। कामबाट तनाव लिनेहरुलाई उनले दिनमा एक घन्टा ध्यान गर्न उनको आग्रह छ। 'ध्यानबारे ज्ञान नभएसम्म नौलो लाग्छ। ध्यान सुरु भएपछि सोच्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ। बिस्तारै परिवर्तन ल्याउन ६ महिना आफूलाई समय दिनुपर्छ,' उनी भन्छिन्। 'ध्यान सिकाउने नियमहरु छन्। ध्यान सिक्ने र सिकाउनेले नियममा बस्न सक्नुपर्छ,' उनले भनिन्। अनुसार अधिकंाश सहभागीहरु मानसिक तनाव बढेपछिमात्र ध्यान केन्द्रमा आउने गरेको उनले पाएकी छन्। पाका मान्छेहरुलाई सुरुमा ध्यान सिकाउँदा उनले केही असजिलो महसुस गरेकी थिइन्। हाल म्युजिक भिडियोमा व्यस्त उनीद्वारा अभिनित फिल्म 'सेफल्यान्डिङ' रिलिजको तयारीमा छ। « ३१ औंमा बल्ल रिलिज!
आर्मी हेलिकप्टरमा हिरोइन! »